The Rohingya News Bank : ICRC
" ယူနီကုတျနှငျ့ ဖျောဂြီ ဖောငျ့ နှဈမြိုး စလုံး ဖတျနိုငျအောငျ( ၂၁-၀၂-၂၀၂၂ ) မှစ၍ဖတျရှုနိုငျပါပွီ။ ( Microsoft Chrome ကို အသုံးပွုပါ ) "
Showing posts with label ICRC. Show all posts
US Embassy will urge the State Government to be effective in the provision of aid to Rakhine IDPs
The US Embassy will urge the Rakhine State Government to be effective in aid provision to Rakhine IDPs, the Yangon based US Embassy’s Deputy Chief of Mission Mr George Neil Sibley has confirmed while meeting with Rakhine State Parliamentarians.
According to Deputy Speaker U Myat Than, who spoke with Narinjara, Mr George Neil Sibley said this while being received by the Rakhine Parliament Speaker U San Kyaw Hla on February 20th.
at February 25, 2020 No comments:
Labels: 2020, AA, en, ICRC, IDP, INGO, News, Rakhine State, US Embassy, WFP
ဒုက္ခသည်အရေး မြန်မာကိုဖိအားပေးဖို့ ICRC ကို ဘင်္ဂလား တိုက်တွန်း
16 ဇန်နဝါရီ၊ 2020
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ရောက်နေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ နေ ရပ်ပြန်ပြီး ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် မြန်မာဘက်က ဖန်တီးပေးရေး ICRC နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ AK Abdul Momen က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ တိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
Labels: 2020, ICRC, mm, ဖိအားပေး, ဗွီအိုအေ, မြန်မာ, ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်, သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကာလရှည်ကြာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ (IRC) ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကာလရှည်ကြာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ (IRC) ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်တွင်သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
ငါးနှစ်ကျော်မျှ မြေပုံနှင့် မင်းပြားမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၁၀၂ ရွာတွင် လူဦးရေ ၅၆၀၀၀ ကျော်အား စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အကူအညီများပေးခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အကူအ ညီပေးရေးအဖွဲ့ (IRC) ၏ တက်လမ်းစီမံချက်ကို ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Labels: 2020, ICRC, mm, ရပ်ဆိုင်း, ဆောင်းပါး
ICRC ရိက္ခာကူညီမှု ဘူးသီးတောင်မှာ ကန့်သတ်ခံရ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် စိန်ညင်းပြာကျေးရွာကို ၂၀၁၉၊ အောက်တိုဘာလထဲမှာ ICRC က စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ သီးနှံမျိုးစေ့တွေ လာရောက်ပေးအပ်စဉ်Photo: International Committee of the Red Cross Myanmar
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် စိုင်းဒင်ချောင်းမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာပေါင်း ၄၀ ခန့်ကို ဧပြီလဝန်း ကျင်ကစပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ(ICRC)က စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေကို ပေးအပ် နေတာပါ။
ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)နဲ့ အစိုးရတပ်မတော်တို့ကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံအများအပြား ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ကြရပြီး ICRC အဖွဲ့က စိုင်းဒင်တံတားအနီး ကင်းတောင်ကျေးရွာမှာ အခြေပြုပြီး အထက်ပိုင်း ကျေးရွာတွေကို ရိက္ခာ ဖြန့်ဝေပေးနေတာပါ။
at November 30, 2019 1 comment:
Labels: 2019, ICRC, mm, RFA Burmese, ဘူးသီးတောင်မြို့, ရိက္ခာယာဉ်တန်း, သတင်း
ရသေ့တောင်က ဒဏ်ရာရသူနှစ်ဦးကို ကယ်ထုတ်ဖို့ ခက်ခဲ နေ
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်ကို တွေ့ရစဉ်
Photo: Google Map
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသက ကျည်ဒဏ်ရာရ လူနာ နှစ်ဦးကို ကယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုး စားနေပေမယ့် ကယ်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းရဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် တာ ဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် မြောက်ပိုင်း ကျောက်ရံကျေးရွာက ၁၃ နှစ်အရွယ် မနှင်းချေနဲ့ ငစင်ဘော် ကျေးရွာက အသက် ၆၀ ဝန်းကျင်အရွယ် ဒေါ်သိန်းညွန့်မတို့ နှစ်ဦးဟာ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ကျည်သင့် ဒဏ် ရာတွေ အသီးသီးရရှိထားကြပါတယ်။
at November 01, 2019 No comments:
Labels: 2019, AA, ICRC, mm, တပ်မတော်, ရသေ့တောင်မြို့, သတင်း
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ကျေးရွာ၎ ရွာထဲတွင်ပိတ်မိနေ ခဲ့သည့် သက်ကြီးရွယ်အို ၁ဝဦးအား ICRC မှကယ် ထုတ်
စစ်တွေ၊ ဇူလိုင် ၃ဝ/၂ဝ၁၉
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဥယျာဉ်သာ၊ ရှပ်ရှားတောင်၊ စံဂိုးထောင်နှင့် နွားရုံတောင် ကျေးရွာ ၄ရွာမှ ရွာတွင် ထွက်မပြေးနိုင်ဘဲ ကျန်ရှိနေခဲ့သည့် သက်ကြီး ရွယ်အို ၁ဝ ဦးအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက် ခြေနီကော်မတီ ICRC မှ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့က ကယ်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Labels: 2019, ICRC, mm, ကယ်ထုတ်, စံဂိုးတောင်, ဘူးသီးတောင်မြို့, သက်ကြီးရွယ်အို, နွားရုံတောင်
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာ ICRC ရဲ့အကူအညီတား ဆီးခံရ
စစ်တွေမြို့ ICRC ရုံးကိုတွေ့ရစဉ်။ Photo: Min Thein Aung/RFA
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် စိုင်းဒင်ရေတံခွန်အထက်ပိုင်း သြရမကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာ
တွေ က ဒေသခံတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ ICRC က ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့က စား နပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့သွားရောက်ခဲ့ရာမှာ စိုင်းဒင်တံတားအရောက်မှာ လုံခြုံရေးအကြောင်း ပြချက်နဲ့ တပ်မတော်က တားမြစ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
at July 04, 2019 No comments:
Labels: 2019, ICRC, mm, RFA Burmese, တားဆီး, ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်, သတင်း
ICRC ရဲ့ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ ကုန်တင်ကားတွေ မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရ
မိုင်းခွဲခံရတဲ့ ICRC အဖွဲ့ရဲ့ ကားကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ် ဓာတ်ပုံ - ရဲဇာနည်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့ မဟာမုနိလမ်းဆုံအနီးမှာ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ မနေ့ညက အပြည်ပြည် ဆိုင် ရာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ ICRC ရဲ့ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေ တင်ဆောင်လာတဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်တန်း မိုင်း ဆွဲ တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ AA တို့ အပြန်အလှန်စွပ်စွဲနေကြပါတယ်။
ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ မိုင်းလို့ အစိုးရတပ်မတော်ဘက်က တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဗိုလ်မှူး ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသလို AA ဘက်က ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံခိုင်သုခကလည်း အဲ့ဒီ အနီးမှာ မနေ့ ည က သူတို့တပ်တွေ မရှိဘဲ အစိုးရတပ်တွေသာ ရှိခဲ့တာကြောင့် အစိုးရဘက်က မိုင်းခွဲ ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ ပြော ပါတယ်။
at June 28, 2019 No comments:
Labels: 2019, AA, ICRC, mm, RFA Burmese, မြန်မာ့တပ်မတော်, မိုင်းခွဲ, သတင်း, ကျောက်တော်မြို့
ICRC ရိက္ခာယာဉ်တန်းကို အေအေတိုက်တာ မဟုတ် ဘူးလို့ ငြင်းဆို
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ICRC ရဲ့ ရိက္ခာတွေကို ရန်ကုန်ကနေ မောင်တောကိုပို့တဲ့ ယာဉ်တန်း ဇွန်လ ၂၇ ရက် ညပိုင်းက တိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာ အေအေ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ အေအေ အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခက ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, AA, ICRC, mm, မြန်မာ့တပ်မတော်, ဘီဘီစီ မြန်မာ, ရိက္ခာယာဉ်တန်း, သတင်း
Myanmar troops kill six in Rakhine for suspected rebel links.
Soldiers opened fire asaclash erupted with the detained villagers, according to member of parliament.
More recently, civilians have been caught up in clashes between the military and the Arakan Army [File:Min Kyi Thein/AP Photo]
Myanmar security forces have shot dead at least six people in the troubled western state of Rakhine after soldiers and police detained hundreds of people ataschool,amilitary spokesperson said.
at May 03, 2019 No comments:
Labels: 2019, Al Jazeera, Detained, en, ICRC, Military, Myanmar, Myanmar Parliment, Myanmar Red Cross, Myanmar Soldier, News, Rakhine State, Rohingya Muslims, UN
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တိုးလာတာ ကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ICRC ထုတ်ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ် တင်းထိန်ကန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို တွေ့ရစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် နဲ့ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA တို့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၂၉၀၀၀ (နှစ်သောင်းကိုးထောင်)ကျော် ရှိလာတဲ့ အတွက် နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ICRC က စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း မနေ့က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက် ပါတယ်။
at April 14, 2019 No comments:
Labels: 2019, AA, ICRC, mm, စစ်ဘေးဒုက္ခသည်, ယာယီစခန်း, ရသေ့တောင်
ရခိုင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အရေး ICRC စိုးရိမ်
13 ဧပြီ၊ 2019
ICRC ဥက္ကဋ္ဌ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ဒေသခံများနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ-ICRC)
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွါးနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွါထွက်ပြေးကြရတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခ သည် အရေအတွက် တိုးပွါးလာနေတဲ့အပေါ် ICRC နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီအဖွဲ့က စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အကြောင်း မနေ့က သတင်းထုတ် ပြန်ပါတယ်။
Labels: 2019, ICRC, mm, စစ်ပြေးဒုက္ခသည်, ဗွီအိုအေ, ရခိုင်
Rohingya Survivors in Rathedaung Yet to Receive Aid from ICRC.
Yan Naing | Apr 07, 2019
Rathedaung — Rohingya Genocide Survivors in northern Rathedaung Township have been affected the most by the ongoing fightings between Myanmar military and Rakhine rebels (or Arakan Army) but are yet to receive humanitarian aids from ICRC (International Committee of the Red Cross), survivors say.
Labels: 2019, AA, Akyab, Arakan Army, en, Genocide Survivors, ICRC, Myanmar Military, News, Rakhine rebels, Rathedaung, Rohingya genocide, Rohingya Today
ရခိုင်မှ စစ်ဘေးရှောင်များ နေရပ်မပြန်နိုင်သရွေ့ICRC က ထောက်ပံ့ကူညီမည်ဟုဆို
မာန်ယုကျော် (ရွှေဝ မြေ)
နိရဉ္စရာ၊ မတ် ၃ဝ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်များအနေဖြင့် မိမိနေရပ်သို့ မပြန်နိုင်သေးသရွေ့ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအား ထောက်ပံ့ကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ(ICRC)က ပြောသည်။
at March 30, 2019 No comments:
Labels: 2019, ICRC, mm, စစ်ဘေးရှောင်, နိရဉ္စရာ, ရခိုင်
Amnesty: Myanmar army ops target Rakhine state.
5,200 men, women, children displaced due to ongoing fighting by Jan. 28, according to human rights group citing UN figures.
Myanmar security forces have shelled villages and blocked civilians from accessing food and humanitarian assistance in western Rakhine state since early 2019,arights groups said Monday.
“Security forces have also used vague and repressive laws to detain civilians in the area,” according to the Amnesty International report based on fresh evidence on ongoing military operations.
at February 11, 2019 No comments:
Labels: 2019, AA, AI, Arakan, Arakan Army, BGP, Displaced, en, ICRC, Myanmar Army, News, OIDA, Persecution, Rohingya, Shelling, UN, WFP
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကြက်ခြေနီလုပ်ငန်းတချို့ရပ်နား ထားရ
ICRC အဖွဲ့ အမှတ်အသား
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ထိခိုက်ခံစားနေရသူ ငါးထောင် ကျော်ကို အရေးပေါ် အကူအညီတွေပေးနေပေမယ့်၊ မြို့နယ်ငါးမြို့နယ်မှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေကြောင့် ကြက်ခြေနီလုပ်ငန်းတချို့ကို ရပ်နားထားရတယ်လို့ ICRC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့က ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, ICRC, mm, NGO, RFA Burmese, ဘူးသီးတောင်, ရသေ့တောင်, မောင်တော
U.N. calls for 'rapid and unimpeded' aid access to Myanmar's Rakhine
YANGON (Reuters) - The United Nations called on the Myanmar government on Monday to allow “rapid and unimpeded” humanitarian access to Rakhine State, where fighting between government troops and autonomy-seeking rebels has displaced thousands of people.
Myanmar border guard police stand guard at Goke Pi outpost in Buthidaung duringagovernment organized media tour in Rakhine, Myanmar, January 7, 2019. REUTERS/Stringer
The Rakhine State government issuedanotice last week blocking non-governmental organizations and U.N. agencies from traveling to rural areas in five townships in the northern and central parts of the state affected by the conflict.
at January 14, 2019 No comments:
Labels: 2019, DASSK, en, ICRC, News, Rakhine, Reuters, UN, UNOCHA
‘New arrivals’ of Rohingyas cloud repatriation prospects
Worsening situation in Rakhine brings worries
Despite Bangladesh's efforts to resume the repatriation process, the recent deteriorating condition in Myanmar’s Rakhine has worried all concerned, clouding repatriation prospects, officials are indicating.
Labels: 2019, Bangladesh, en, ICRC, News, Rakhine, Refugee, Rohingya, UNHCR
( 16.12.2018 ) Forcible repatriation of Rohingya dangerous
TEHRAN - Justalittle more thanayear ago, at least ten thousand Rohingya were killed in northern Rakhine state, at least 350 villages were burnt to the ground. Asaresult, about 750,000 had to flee to neighboring Bangladesh.
at December 16, 2018 No comments:
Labels: 2018, Arakan, Bangladesh, en, ICRC, IDP, IFFM, Malaysia, Nay San Lwin, NVC_Card, Rohingya, WFP
( 25.08.2018 ) Rohingya crisis, one year on: An awful past,apresent in despair, and an uncertain future ( dhakatribune.com )
Aerial view ofaburned Rohingya village near Maungdaw, north of Rakhine State, Myanmar on September 27, 2017 Reuters file photo
UN bodies, international rights organizations, NGOs, and Rohingya diasporas, talk to the Dhaka Tribune regarding the ongoing crisis and possible solution
One year has passed but still no headway has been made in solving the ongoing Rohingya crisis.
Labels: 2018, Action Aid, AI, BD R.Camp, en, HRW, ICRC, INGO, Maung Daw, Nay San Lwin, Refugee, Rohingya, UN, UNHCR, UNICEF, WFP, WHO
Popular News စိတျဝငျစားဘှယျသတငျးမြား
ယူကရိနျး နိုငျငံ ပထဝီဝငျသမိုငျး
Briefing: How the Rohingya crisis in Bangladesh is changing
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး လုပျကွံခံရမှု၏ နောကျကှယျမှ ပဟဠေိ ကှငျးဆကျမြား
မြန်မာ့သမိုင်းထဲမှ ရ န္တပို
919 - အဋ္ဌမတန်း မြန်မာ သဒ္ဒါ အတွဲ (၁)၊ အခန်း (၄)
Archive လအလိုကျသတငျးမြား July 2022 (5) June 2022 (68) May 2022 (17) April 2022 (36) March 2022 (82) February 2022 (71) January 2022 (82) December 2021 (61) November 2021 (55) October 2021 (95) September 2021 (40) August 2021 (86) July 2021 (70) June 2021 (216) May 2021 (206) April 2021 (246) March 2021 (322) February 2021 (232) January 2021 (173) December 2020 (174) November 2020 (153) October 2020 (193) September 2020 (109) August 2020 (92) July 2020 (139) June 2020 (157) May 2020 (192) April 2020 (90) March 2020 (102) February 2020 (212) January 2020 (310) December 2019 (306) November 2019 (339) October 2019 (184) September 2019 (162) August 2019 (186) July 2019 (345) June 2019 (386) May 2019 (422) April 2019 (523) March 2019 (623) February 2019 (517) January 2019 (439) December 2018 (11) November 2018 (37) October 2018 (174) September 2018 (46) August 2018 (57) July 2018 (9) June 2018 (14) May 2018 (16) April 2018 (13) March 2018 (11) February 2018 (7) January 2018 (6) December 2017 (10) November 2017 (10) October 2017 (59) September 2017 (65) August 2017 (2) July 2017 (5) March 2017 (6) January 2017 (4) December 2016 (34) November 2016 (76) October 2016 (15) September 2016 (3) August 2016 (6) June 2016 (2) May 2016 (1) April 2016 (2) January 2016 (1) December 2015 (2) October 2015 (1) September 2015 (3) August 2015 (44) July 2015 (1) June 2015 (5) April 2015 (2) February 2015 (6) January 2015 (1) December 2014 (1) November 2014 (2) October 2014 (1) September 2014 (2) July 2014 (1) June 2014 (2) May 2014 (1) April 2014 (1) March 2014 (1) January 2014 (3) December 2013 (1) November 2013 (1) October 2013 (2) September 2013 (2) August 2013 (5) July 2013 (4) June 2013 (17) May 2013 (26) April 2013 (15) March 2013 (3) February 2013 (2) January 2013 (37) December 2012 (488) November 2012 (13) October 2012 (11) September 2012 (2) August 2012 (14) July 2012 (1) June 2012 (2) May 2012 (1) January 2012 (5) November 2011 (1) October 2011 (1) August 2011 (1) January 2011 (1) February 2010 (1) January 2010 (1) October 2009 (1) February 2009 (1) January 2009 (1) January 2008 (1) January 2007 (1) January 2006 (1) January 2005 (1) January 2004 (1) July 2003 (2) February 2001 (1) July 1998 (1) September 1996 (1) March 1996 (1) December 1994 (1) December 1993 (1) October 1993 (1) December 1992 (1) May 1992 (1) December 1991 (1) May 1978 (1)
Contact Form ဤနရောမှဆကျသှယျပါ။
ဝငျ‌ရောကျ ဖတျရှုသူမြားအား ကြေးဇူးတငျပါသညျ။